China Optical Brightener CBS-127 yoMvelisi kunye noMthengisi | BGT
Ukukhanya kweBrightener CBS-127
Ukukhanya okuKhanyayo I-CBS-127yongezwa kwizinto ezininzi ukunciphisa ubumthubi, ukuphucula ubumhlophe, kunye nokuqaqambisa imveliso. Isetyenziswa ngokubanzi kwimarike yeplastiki. Ngenxa yesakhono sayo esihle sokuqaqamba, uzinzo olushushu lwe-thermal, kunye nokuhambelana neepolymers ezininzi.
I-OB-1 Unokuphucula ubumhlophe bePolymer ePhinda isetyenzisiwe: Ngokusebenzisa izinto ezikhanyayo ezibonakalayo, ixabiso lezinto eziphinda zenziwe zinokuphakanyiswa kakhulu ngokubonelela ngombala omhlophe ofanayo. I-OB-1 iya kuphucula kakhulu ubumhlophe, ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwefayibha kufuna kuphela i-200-300 ppm kwipolymer entsha, kodwa izinto ezirisayikilishekileyo zinokufuna kangange-300-450 ppm. Izibane ezikhanyayo zisebenza kakhulu ekuphuculeni ukubonakala kwepolymer okanye ifayibha. I-off-class okanye i-polymer ye-nylon esemgangathweni yesibini nayo inokuphuculwa ngendlela efanayo.
I-OB ineempawu ezintle zokumelana nobushushu, iipropathi ezenza mhlophe ngokungaqhelekanga, ukukhanya okukhawulezileyo kunye nokungazinzi. Ezona zicelo ziphambili zibandakanya imicu, amanqaku abunjiweyo, iimovie kunye neemakhishithi. Kananjalo inokusetyenziswa kwi-lacquers ecacileyo, i-lacquers enemibala, iipeyinti, inki yokuprinta kunye nolusu olwenziweyo. Iya kuvelisa ukuqaqamba okuqaqambe nge-dyestuff, esebenza kakuhle kumkhombandlela wemibala emininzi.
I-CBS-127 yi-Optical Brightener esebenzayo kwiipholima, ngakumbi iimveliso zePVC kunye nefenylethylene. Ingongezwa kwiipholima njenge-pigment. Umbala omhlophe oqaqambileyo uya kubonakala kwiimveliso ukuba zisetyenzisiwe I-CBS-127 Kunye neatase titania. Uxinzelelo lweI-CBS-127 kufuneka wongeze ukuba i-rutile anatase titania izakusetyenziswa.
(Ngeenkcukacha kunye ne-TDS epheleleyo inokubonelelwa ngokwesicelo ngasinye “Shiya umyalezo wakho”)
Egqithileyo Ukukhanya kwe-Brightener OB
I-CBS yokuKhanya ngokuKhanya